सुरज गिरी – मझेरी डट कम
इतिहासको त्यो सुन्दर परिदृष्य
बन्दुक र तोपका गोलासँग लड्दै
किल्ला जमाई बस्ने कथाहरू
नाल अनि बन्दुकमाथि
विजयी गर्ने यस धर्तीका शहिदहरू
सम्झी सम्झी आज
देश रोइरहेछ ।
जीत उनको भयो
रङ्गशाला मेरो थियो जीत उनको भयो
बाजी मारे मैले कति जीत उनको भयो ।
जितें सम्झी हौसियर अबिरजात्रा गरें
हार मान्दै बसेपनि जीत उनको भयो ।
शुभकामना हजुरलाई यो वर्षको
बितोस जीवन सधैँ सुख र हर्षको
बितुन् दिनहरू सूर्य झैं चम्केर
रातमा चन्द्रको कान्ति छर्केर
‘आँसुले जलेका मनहरू’को गजल संग्रहको लोकार्पण सम्पन्न
गजलकारद्वय खगेन्द्र कुमार अमृत र कुमार श्रेष्ठ यात्रीको संयुक्त गजल संग्रह ‘आँसुले जलेका मनहरू’ नामक पुस्तक काठमाण्डौ, हनुमान ढोकास्थित भुङ्ग्रो रेष्टुरेण्ट एण्ड बारमा भव्यताका साथ लोकार्पण भयो ।
गजल-संग्रह ‘आँसुले जलेका मनहरूको’ लोकार्पित
गजलकारद्वय खगेन्द्र कुमार अमृत र कुमार श्रेष्ठ यात्रीको संयुक्त गजल संग्रह आँसुले जलेका मनहरू नामक पुस्तक काठमाण्डौ, हनुमान ढोकास्थित भुङ्ग्रो रेष्टुरेण्ट एण्ड बारमा भव्यताका साथ लोकार्पण भयो ।
भित्ता छेड्दै छालाको रिसाइ
देखाउँछ बाहिर सबलाई टल्पलाई
सहारा सबलाई बन्छ थकाइको
पग्ली पानी पानी बनी तप्किन्छ यो
विकार बोकी निस्कन्छ दुर्गन्ध लिएर
स्वच्छ बनाउन जीवन ऊ हो पसिना
यसै पनि तिम्रो मनबाट हराएको मान्छे,
बिछोड र पीडाबाट डराएको मान्छे ।
यादहरू संगालेर हिंड्छु खोज्दै पलहरू,
समय र आफन्तले बर्बराएको मान्छे ।
हुर्याउँदै वटुवा बनी
रन्थनिएको मन लिएर
श्राप हो या अभिश्राप
चेतनाले ठम्याउनै गाह्रो
घरि लुकाउन खोज्छ
घरि देखाउन खोज्छ
मानवताको खोल फालेर
नङ्ग्याउँछ अस्मिता ।
विश्वमान चित्रमा लाडाकुको देश नेपाल भनेर प्रख्यात हाम्रो मुलुक साँच्ची नै योद्धा र वीर वीराङ्गनाका शाहसीक कदम र आँट अनि बहादुरीको इतिहासले कुदेको हो । नालापानी किल्लामा नेपाली बहादुरहरूले देखाएको अदम्य साहासको बावजुद आज पनी अंग्रेजहरूले नेपालीलाई बहादुर भनी आदरका साथ नाम लिने गर्दछन् । भारतको के आँट थियो र नेपाली फौजको अगाडि ? नेपाली बहादुरहरूलाई साथ लिएर अंग्रेजलाई भारतबाट भगाउने भारतीयहरूले आजभोली नेपालीहरूलाई बहादुर भनेर बोलाएतापनि त्यो शब्दमा आदरताको भावना देखिंदैन । उनीहरू नेपालीलाई छुद्र बचनको प्रयोग मार्फत बहादुर भन्ने गर्दछन् ।
तन चुडियो, मन चुडियो
तिम्रो सम्झनामा यौवन चुडियो
निर्रथक बन्यो प्रेम
अनिष्ठ बन्यो यात्रा
तिमी सर्किंदै पर पुग्यौ
त्यही कल्पनामा जीवन चुडियो ।
आयो हुरी आँधी बनेर,
विध्वंस पार्ने हो कि कतै ।
अँध्यारो छाउने केश छरेर,
कालोरात बनाउँदै जताततै ।
अनिष्ठताले आँखा खोल्यो,
विनम्रताले मुख मोड्यो ।
शान्ति हराउँदै कुकृत्य बढ्यो,
विदेशीका नजर झनझन गड्यो ।
मन नमिल्दै लाउने माया एउटा भुल भन्थे
बिझेपछि मुटु भित्र बन्छ ठुलो सुल भन्थे ।
लुकी छिपी लगाउनु गल्ती रैछ माया प्रीति,
यथार्थमा मिलन हुन्न विछोडको मुल भन्थे ।
यो देशमा म भएँ अति नजाति,
भनिदेऊ न हे आमा म हुँ के जाति ?
गोद एउटै छ आँचल एउटै छ,
सोँच एउटै छ, रचना एउटै छ
ईश्वरले पठायो शरीर बनाई,
हाड, छाला, रगत, सास एउटै छ ।
रौम्य र सौम्य अनि अदम्य र असह्य मनको कथामा आधारित यस कल्पनाको यात्रामा हराउँदा भन्ने शीर्षकले कोरेको शब्दावलीको विश्लेषण एवं व्याख्या हो । सर्बसुलभ मानवको जमातमा पसेर भोलिका सन्ततिका निम्ति चिन्तन र उनीहरूका कल्पनासँगको मोह माया वा जीवनको यथार्थ सत्यतालाई बोध गराउँछ । मैले पनि पिरती जोडेको थिएँ – यस्तै कल्पनासँग कहिल्यै कुनै पनि क्षणमा नछुट्टिने वाचालाई शिरोपर गरी जोडेको पिरती थियो । कुन्नि ! किन अहिले रिसाएकी छिन् कल्पना ? उनी– मसँग भेट गरी, मनका कुरा बाँड्न र केही दुःखका क्षणमा शान्त्वना दिन किन हिचकिचाउँछिन् ?
देशले दिएन नभन
देशले दिएन नभन,
हात बढाऊ तिमीले ।
देशले हेरेन नभन,
दृष्टि लगाऊ तिमीले ।।
किन यस्तो मान्छिन् उनी
माया साट्ने वाचा गर्दा मन दुख्ने मान्छिन् उनी,
मेरो माया अछुत छैन किन यस्तो ठान्छिन् उनी,
घाउहरू त चहराउँछन् प्रेम विछोड हुँदा खेरी,
आफु दुख्दा मैले हाँसे अति मिठो मान्छिन् उनी ।
सबैले राज्य पाउने भए रे,
आफ्नो सुर आर्फै गर्ने भए रे,
ठूलो बुबा मगरातमा परे रे,
मेरो दाजु अवधमा छन् रे ।
राज्यको झाँकी छ ।
अंग्रेजहरू मनाउँछन् अँगालोमा बेरेर,
इण्डियनहरू मनाउँछन् झ्यालबाट हेरेर,
नेपालीहरू मनाउँछन् कागजमा केरेर
आज के रहेछ पर्व भनन न साथी हेई,
सबैको मान्यता हेपी भ्यालेन्टाइन डेई ।
तिम्रो सन्तति बन्न सकूँ
जन्म दिने माता जननी
फलदिने धर्ती जननी,
भाषा दिने नेपाल जननी
खुशी भराउने प्रेम जननी ।